I-china 1350KG, 1500KG Uhlobo lwabakhiqizi bohlelo lwe-Magnetic formwork kanye nabaphakeli | Meiko Magnetics
I-1350KG noma i-1500KG yohlobo lwamagnetic formwork system enekhabhoni yensimbi yegobolondo futhi luhlobo olujwayelekile lomthamo wamandla wokulungiswa kwe-preform plateform, enconyelwa kakhulu ukuthi isetshenziselwe ukulungisa i-sidemould kumaphaneli wesangweji kakhonkolo we-precast. Ingafanelana kahle ne-formwork yensimbi noma ifomu lepulangwe lamapulangwe.
1350KG noma 1500KG Magnetic Formwork System futhi uhlobo olujwayelekile lomthamo wamandla wokulungiswa kokhonkolo wangaphambi kokhonkolo, okunconyelwa kakhulu ukuthi kusetshenziselwe ukulungisa i-sidemould kumapaneli wokhonkolo wangaphambi kokhonkolo. Ingangena kahle ku-formwork yensimbi noma ifomu lepulangwe lamapulangwe, ngama-adaptha ahlukile noma amabhawodi wokucindezela.
Ngemuva kokucindezelwa kwenkinobho, odonsa bebhokisi babamba itafula ngokuqinile. Kulula ukubethela ipuleti lensimbi kupuleti lokhuni ngezipikili.Kungasebenza ngokuvele ucindezele inkinobho ngesandla noma ngonyawo. Ukuze usebenze, odonsa bakhishwa kalula yinsimbi yensimbi (ukudonsa inkinobho). Esimweni sokungasebenzi, ozibuthe bokuvala bangasuswa kalula kwifomu letafula. Ozibuthe bakakhonkolo abangasetshenziswa bangasetshenziswa bodwa noma baxhumeke ne-adpator ukulungisa ifomu. Ngokuvamile u-1350Kg mpo wamandla ebhokisi wamandla ulungele ngokuphelele ukukhiqizwa kwephaneli lodonga lwama-80-150mm. Futhi, siyakwazi ukwenza amandla omazibuthe bamandla we-foce box, njengoba no-2500KG, nohlobo lwe-3000KG njengezidingo zakho.
Ngenxa yokuhlangenwe nakho kwethu okunothile kumaphrojekthi kakhonkolo we-precast alandelayo, thina, iMeiko Magnetics, siyakwazi ukuklama nokukhiqiza zonke izixazululo zikasayizi kazibuthe wefektri yezinto zangaphambi kokhonkolo, akunandaba ukuthi odonsa ngamabhokisi anjani, odonsa abafakiwe, odonsa bamapayipi, ikhefu likazibuthe langaphambili noma elinye amandla kazibuthe izinhlelo kuzinhlelo zokusebenza ze-precast.
Langaphambilini 900KG, 1Ton Box Magnets For Precast Tilting Ithebula Isikhunta Ukulungisa
Olandelayo: Ama-Magnets wokuvala ama-1800KG anenkinobho yokuvula / yokuvala ye-Prefabricated Building Formwork System
1.5Ton Amandla Inkinobho Magnet
1350Kg Magnet Ibhokisi
1350KG Precast Ukhonkolo Magnet
1350KG Ozibuthe Shuttering
I-1500KG Box Magnet
I-1500KG Magnetic Box
Uhlobo lwe-1500KG lwebhokisi likazibuthe
Ama-450KG Box Magnets anenkinobho yokudonsa